तपाईं कसैको ‘यस म्यान’ बन्न हुँदैन - Ratopati
कहिल्यै सोचेको थिइनँ– प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी लेख्छु होला भनेर । देश नांगो, भुतुंगो अनि टुहुरो हुन लागेको अवस्थामा यी कलिला आँखाले देख्न सकेनन् । त्यसैले बाध्य भएर हजुरलाई यो चिट्ठी लेख्दै छु ।म, न माओवादी हुँ, न एमाले, न त कांग्र्रेस नै । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा मैले कुनै पार्टीको झन्डा फहराएर वा निधारमा फेटा बाँधेर कहिल्यै हिँडेको छैन । म त केवल यो देशको नागरिक हुँ। विद्यार्थी हुँ । देशप्रेमी हुँ ।
अघिल्लो वर्ष हामीले धेरै कुरा सह्यौँ । भूकम्प, दैवीप्रकोप, विपत्ति, मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी आदि । खुसीको कुरा त के भने तीन/चार महिना नाकाबन्दी भए पनि भारतसामु झुक्नु परेन । सायद नेपालको संविधानप्रति भारत रूष्ट भएर नाकाबन्दी लगाएको थियो होला । त्यसबखत हजुर पनि विरोधमा उत्रनुभएको थियो । र भन्नुभएको थियो, ‘हामी कसैको यस म्यान होइनौ ।’ बडो आनन्द महसुस भइरहेको थियो, हजुरको अभिव्यक्तिले । आशा छ, हजुर झुकेर कहिल्यै पनि कुनै देशको यस म्यान हुनुहुने छैन । अर्काे कुरा भूकम्पपीडितको । उनीहरुले राहत नपाएको कुरा ताजै छ । पाल फेरिएन तर सरकार भने तीनपटकसम्म फेरियो योबीचमा । अघिल्लो सरकार, राहत वितरण कार्यमा अति सुस्त भएको कुरा सत्य हो । हजुरको नजर चाँडै पुगोस् र राहत तीव्र गतिमा वितरण होस् । अझ पनि ढिला हुनु भनेको हजुरहरुजस्तो नेताका लागि लाजमर्दाे कुरा हो ।
सम्माननीय प्रमज्यू, सन्दर्भ अब मधेस आन्दोलनको । मधेस बिरामी भयो । तर, औषधोपचार गर्न कोही तयार भएनन् । भूपू प्रम ओलीज्यू र हजुरको समीकरणमा बनेको सरकार मौन रह्यो । हजुर सरकारको कुनै पदमा नरहे पनि हजुरको पार्टी, माओवादी केन्द्रका नेताहरु सहभागी थिए । मधेस आन्दोलनक्रममा धेरै कुरा भए । निर्दाेषको हत्या, बन्द–हडताल, चक्काजाम । सास्ती त हामीजस्ता निमुखा जनतालाई मात्रै रहेछ । तर, हजुरको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले आएर मधेसप्रति जुन उदारता देखाएको छ, अति नै प्रसंशायोग्य छ । किनभने सबै जनता समेटिए भनेमात्र देश सुन्दर हुन्छ । तर हजुरले, सत्तामा पुग्न गरेका तीनबुँदे सहमतिप्रति जनताको ठूलो विमति छ– सहिद घोषणा गर्नेसम्बन्धमा । मधेस आन्दोलन चर्काउने कोही नभएर मधेसी नेता नै थिए । आन्दोलनक्रममा मधेसका मात्र मारिएनन्, पहाडका पनि मारिए । निर्दोष प्रहरी कर्मचारी मारिए । दूधेबालक मारियो । अचम्मको कुरा के भने विहारका केही बासिन्दा पनि आन्दोलनमा होमिए । र, पचास लाख राहत पाउने लोभमा मृत्यु रोज्ने पनि देख्न पाइयो ।
प्रमज्यू, कसलाई गर्नुहुन्छ सहिद घोषणा ? के जो आन्दोलनक्रममा निधारमा पार्टीको फेटा बाँधेर प्राण त्यागेकालाई सहिद घोषणा गर्नुहुन्छ ? कि मुटुमा देश बोकेर प्राण उत्सर्ग गर्ने प्रहरीलाई ? विचार पुर्याउनुहोला यस सन्दर्भमा । हजुरसामु धेरै चुनौती थपिएका छ्न । देश र जनता दुवै अब हजुरका हातमा छन् । के गरी देश र जनतालाई अभिभावकत्व दिलाउने, हजुरकै हातमा छ ।आशा छ, देश र जनताप्रति हजुरको सद्भाव कायम रहनेछ ।
प्रमज्यू, हजुरप्रति मेरो निजी गुनासो पनि छ । मेरा एकजना काका हुनुहुन्थ्यो । नाम उल्लेख गर्न सकिनँ उनको गोली हानी हत्या भएको रहेछ । म सानै थिएँ त्योबेला । किन हत्या गरेका होलान् भनेर सोचमग्न हुन्थेँ । अझसम्म मैले थाहा पाउन सकेको छैन । मेरा काका, दाजुदिदी, आमाबुवाको किन निर्मम ढंगले हत्या गरियो । केही गल्ती गर्नुभएको थियो र उहाँहरुले ? हजुरहरुको कथित क्रान्तिका नाममा हत्या गरिएकाको परिवार कति बिचल्लीमा छन्, हरदैलो पुगेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला ।
मुलकमा भइरहेको वितन्डा देखेर, केही बोल्न नसकेकोमा हीनताबोध भइरहेको थियो । अब भने मनमा केही शान्ति मिल्छ कि भन्ने आशा लिएको छु ।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रमज्यू, पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमको व्याख्या ओकल्न उपयुक्त मानिनँ । सबैको मानसपटलमा ताजै छ । त्यही क्रमपश्चात्, हजुरको सत्तारोहण भएको छ । उक्त कदम अशोभनीय देखिए पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाइ तथा कार्यकाल सफलको शुभकामना ।